Taphattoonni kubbaa miilaa Eertiraa 7 buufata xiyyaaraa Kaampaalaatti badan - BBC News Afaan Oromoo
Taphattoonni kubbaa miilaa Eertiraa 7 buufata xiyyaaraa Kaampaalaatti badan
Madda suuraa, የኡጋንዳ እግር ኳስ ፌዴሬሽን
Miseensota gartuu kubbaa milaa Eertiraa dorgommii 'CECAFA' baranaa irratti hirmaatan
Waldorgommii kubbaa miilaa Mana Maree Waldaalee Kubba Miilaa Bahaafi Gidduu Galeessa Afrikaa (CECAFA) irratti hirmaachuuf taphattoota gartuu biyyaleessa Eertiraa gara Yugaandaa imalan keessa torba baduu isaani himame.
Dubbi himaan 'CECAFA' Roogersi Muliindawa taphatoonni kun kan badan dorgommii isaanii fixanii gara biyya isaaniitti deebi'uuf buufata xiyyaaraa Inteebee erga ga'anii booda ta'u BBC'tti hima.
"Kanaan dura kan badan hoteela isaanii keessaa ture. Amma garuu, buufata xiyyaaraa erga ga'anii booda, 'check-in' gochuu dhiisanii hiriyyoota isaani konkolaataa kireeffatanii isaan eegaa turan waliin badaniiru," jedha.
Taphattoonni Eertiraa afur Yugaandaatti badan
Gaazexessaan ispoortii beekamaa Eertiraa koolugaltummaa gaafate
Taphatoonni kubbaa miilaa Eertiraa dorgommiif biyyaa isaaniitii erga ba'anii boodaa yeroo badan kun kan jalqabaa miti.
Dhimma kanaratti miseensonni Federeeshinnii Kubbaa miilaa Eertiraa deebii akka nu kennanniif yaalii nuti taasifne hin milkoofne.
Onkololeessa darbe dorgommii 'CECAFA' ganna 20 gadii irratti hirmaachuuf biyyaa isaaniitii kan ba'an lammileen Eertiraa afur hooteela buufatan keessaa baduun isaanii ni yaadatama.
Dubbii himaan 'CECAFA' Roogersi akkataa lammileen Eertiraa arfan ji'a Onkololessaa keessa ittiin badan yemmuu yaadatu kana dubbata:
"Kaampaalaa keessa lammilee Eertiraa hedduutu jira. Dorgommii isaan injifatan booda lammileen Eertira hedduu gara hoteela isaanii deemanii deggaarsa kennaafi turani."
"Sana booda dorgomtoonni deeggartoota isaanii waliin wal makuun ture kan hoteelaa ba'ani. Nuti kamtu taphataadha kamtu deeggaraadha isa jedhu addaan baasuu hin dandeenye ture."
Taphatoonni kun baduu isaanii 'CECAFA'n mootummaa Yugaandaa, Federeeshinii Ispoortii Yugaandaafi Yugaandaatti Imbaasii Eertiraa beeksisuu isaanii dubbi himaan kun dubbateera.
Taphattoonni hoteelaa osoo hin taanee maaliif buufata xiyyaraati badan isa jedhuuf " Biyyooti dorgommi kanarratti hirmaatan irraa namooti koree qopheessitu taasifne jiru," kan jedhan dubbi himaan kun, namootni isaan maqaan dhahaniifi jilli Eertiraa irra dhufan kun ogeessota kubbaa miilaa osoo hin taane "miseensoota poolisii olaanaa Eertiraa ta'uu isaanii hubanne," jedha.
Murtessituu kubbaa miilaa dubartii jalqabaa Eertiraa
Kanaaf namni kun hoteela taphoonni buufatan keessa waliin wan turaniif achiirraa baduu akka isaan hin dandeenye dubbatu.
"Dorgommiin hanga dhumutti hoteelaa ba'uu kan isaan hin dandeenye isaan hordofaa waan turreefi" jechuun dubbata.
Taphattooni Eertiraa dorgommii Ispoortiif yeroo biyyaa ba'an hundatti baduun isaani baayyee nu yaaddessaa jira kan jedhu Roojersi, "kun Eertiraaf qofa osoo hin taanee kubbaa miilaa naannichaaf rakkoo kan fidu dha," jedha.
"Akka CECAFA'tti kubbaa miilaa Eertiraa irraa fedhii guddaa qabna. Kubbaan miilaa isaanii ariitiin guddachaa jira."
"Dorgommii 'CECAFA' ganna 20 gadii irratti jalabultii tapha walakkaa xumuraa irratti ture taphattoonni arfan kan badani. Sana booda Eertiraan Keeniyaatiin 1 fi 0'n mo'atamte."
"Ijoolleen kun osoo hin badne ta'ee bu'aan taphichaa kan biraa ta'u danda' ture. Dorgommii isa ammaa irrattis dorgomtoota marsaa xumuraa turani."
"Yeroo yeroon baduun isaanii mootummaan Eertiraa biyyaa ba'u akka isaan dhorku taasisa. Kun ammoo dandeettiin kubbaa miilaa isaani akka hin guddanne taasisa" jechuun yaaddoo isaani ibsaniiru.
Wagga waggaatti dargaggoonni Eertiraa jiranyaa foyyaa'aa barbaacha Eertiraa gadhiisanii baqatu. Gabaasi 2016 irratti ba'e tokko akka ibsutti, lammiilee Afrikaa biyya isaanii gadhiisanii ba'an keessa irra jireessi lammilee Eertiraadha.
Eertiraa keessatti bilisummaan siyaasaafi taajilli looltummaa dirqamaa dhuma hin qabne sababoota biroo waliin dargaggoonni biyya isaani dhiisanii akka ba'an kan taasisu ta'uun isaa ni himama.
Garee Kubbaa Miilaa Eertiraa: Taphattoonni Eertiraa afur Yugaandaatti badan
Hogganaan kutaa ispoortii Televijinii Eertiraa gaazexessaa Kibra'aab Tasfaamikaa'el koolugaltummaa gaafate
Viidiyoo, Battala sararri bilbilaa Itiyoo-Eertiraa baname
Viidiyoo, Murtessituu kubbaa miilaa jalqabaa Eertiraa, Turtii 2,12